Impressi LibreOffice keessatti furtuulee qaxxaamura fayyadamuu
Impressi $ (officename) gahaa taasiisuuf akkasumas iddo hojii keessaan naanna'uuf, gabatee cuqoo fayyadamuu dandeessa. Wantoota fakkasaa uumuudhaaf impressin LibreOffice furtuulee qaxxamuraa fakkasaa LibreOffice waliin wal-fakkaatan fayyadama.
Yeroo Agarsiisa Islaayidii
Gara islaayidii itti aanuutti ykn galtee sochii fakkinaa itti aanuutti olaansi
Galteewwan sochii fakina wantootaa keessoo hin taphachiisin duuratti gara islaayidii itti aanutti olaansi.
Gara islaayidii duraati deebi'i
Gara islaayidii murtaa'atti deemi
Lakkofsa fuula islaayidii barreessitti Galchii dhiibi.
Yemuu dura gara fooyaa islaayidiitti jijjiirtuu, xiyyeffannoo gabatee cuqoo gara iddoo hojiitti jijjiiruuf Enter dhiibi. Karaa biraatiin iddoo hojii keessatti nanna'uuf F6dhiibi kana booda Enter dhiibi.
Islaayidoota Filachuu fi filachuu dhiisu
Islaayidii filu barbaaddutti naanna'uuf furtuulee xiyyxx fayyadami, kana booda kabalaiddoo dhiibii. Gara filmaattaati dabaluuf, islaayidii dabaluu barbaadutti naanna'uuf, furtuulee xiyyaa fayyadamitii kabalaiddoo irradeebi'i dhiibii. Islaayidii akka hin filatamne, gara islaayidiitti nanna'i kabalaiddoo dhiibii.
Islaayidii ammaa Dura ykn Booda fili, kana booda TOLE cuqaasi.
Title is: Impressi $[officename] keessatti furtuulee qaxxaamura fayyadamuu